घाटी दुख्दा चिसो खानु हुदैन भन्नेहरुलाई एक डाक्टरले दिए कडा जवाफ,यस कारण पो रहेछ घाटी दुख्नुको कारण – Sandesh Press
October 3, 2021 534
घाँटी दुःख्ने धेरै कारण हुन्छन्। टन्सीलको छेउमा पिप जम्यो भने घाँटी दुख्छ। एलर्जीको कारणले निल्ने भागमा संक्रमण हुँदा पनि घाँटी दुख्छ। त्यस्तै धेरै बोल्नुपर्ने मान्छेलाई स्वरको अत्यधिक प्रयोगले स्वरनली सुनिएर समस्या आएको हुन्छ।
टन्सलीलको फेदमा लामो हड्डी हुन्छ। त्यो हड्डी आवश्यकताभन्दा लामो भएर नशालाई च्याप्यो भने घाँटी दुख्छ। अर्को कारण क्यान्सर पनि हो। त्यस्तै हड्डी खिइयो भने घाँटीको पछाडिको भाग दुख्छ।कुन कारणले घाँटी दुःखेको हो भन्ने पत्ता लगाएर त्यहीँ अनुसारको उपचार गर्नुपर्छ।
चिकित्सकले इन्डोस्कोपी अथवा भिडियो एक्सरे गरेर यसको कारण पत्ता लगाउँछन्।यस्तो बेलामा तातोपानी खाने चलन छ। यसले केही ठीक गरेजस्तो हुन्छ। तर पुरै ठीक हुने भन्ने हुँदैन। एलर्जीको कारणले समस्या भएको हो भने केही हदसम्म आराम भएजस्तो हुन्छ। तर त्यसले मात्रै सञ्चो हुन्न।
विदेशतिर चिसै खान दिइन्छ। यस्तो बेलामा चिसो खानै नहुने भनेर कुनै किताबमा लेखेको छैन। चिसोको एलर्जी भएकालाई चिसो नखाँदा राम्रो हुनसक्छ। तर यो मुख्य कारण होइन।
घाँटी दुख्नु कोभिडको लक्षण पनि हुनसक्छ। मुख्यतः चिकित्सककहाँ गएर परीक्षण गरेपछि यस्ता समस्याबारे थाहा हुन्छ।घाँटी दुख्नासाथ क्लिनिकमा गएर औषधि किनेर खानु हुँदैन। जेमा पनि रामबाण चलाएजस्तो एन्टीबायोटिक दिने गरिन्छ। यसको जथाभावी प्रयोगले उपचारमासमेत अफ्ठ्यारो परिरहेको छ।
घाँटी दुख्ने समस्या र यसको उपचार कसरी गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रीत रहेर काठमाडौं विश्वविद्यालय, स्कुल अफ मेडिकल साइन्स धुलिखेलमा कार्यरत सह-प्राध्यापक नाँक, कान, घाँटी रोग विशेषज्ञ डा.मोनिका पोखरेलसँग हामीले भिडिओ कुराकानी गरेका छौ।तपाइले सोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवास्ता नगर्नुहोला, ॐ लेखि सेयर गरौं!!! ॐ मात्र उच्चारण गर्नु भयो भने पुरा ब्रमाण्ड्को देबि देबताको शक्ति हुन्छ। त्यसैले देखेको 30 सेकेण्ड भित्रमा शेयर गर्नुहोस ।७ दिन भित्रमा तपाइले नसोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवस्ता नगर्नुहोला !!!अन्यथा अनिस्ट हुनेछ बरिस्ठ3जाना पन्डित ले गेरेन्टी दिनु भयो ॐॐॐॐ साथै यो पेज माथी लाइक गर्नु नभुल्नु होला! ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ !यो पनि पढ्नुस :
Prevभाग्यमानी मानिसलाई धन लाभ हुने २१ वटा संकेतहरु !कतै तपाइमा त छैन??
Nextतपाइले सोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बेवास्ता नगर्नुहोला, ॐ लेखि सेयर गरौं